ကုလားငုတ်တုတ် သောက်ပလုပ်တုပ်(၀ါ) သန့်စင်ခန်းဒုက္ခ(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကုလားငုတ်တုတ် သောက်ပလုပ်တုပ်(၀ါ) သန့်စင်ခန်းဒုက္ခ(၂)
ကုလားငုတ်တုတ် သောက်ပလုပ်တုပ်(၀ါ) သန့်စင်ခန်းဒုက္ခ(၂)
Posted by ကြောင်လေး on Aug 17, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Drama, Essays.., Society & Lifestyle | 19 comments
အထူးခန်းထဲရေလျှံပြီးနောက်ပိုင်းကြောင်လေး ဗော်လန်တီယာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယတန်းအိပ်ခန်းတွေအတွက် ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာခန်းတွေ အပြင်မှာပါ။ ရေလွှတ်တဲ့အချိန်ဆို အများအားဖြင့် အဲဒီအခန်းတွေမှာ ဘားတွေပွင့်နေပြီး ရေတွေတဝေါဝေါထွက်နေတာထုံးစံပါပဲ။ ကြောင်လေးသိတဲ့အချိန်ဆိုရင် မနေနိုင်တော့ တခန်းပြီးတခန်းလိုက်ပိတ်တာပေါ့။ သင်္ဘေားသားတွေကလည်းရေလွှတ်ပြီးရင် လိုက်ပိတ်ပါတယ်။ ကျနော်ပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါဆိုရင် သူတို့သက်သာသွားတာပေါ့။
တပတ်ကျတော့ ကျနော်အခန်းတွေရေလိုက်ပိတ်ရင်း အိမ်သာခန်းတစ်ခန်းရဲ့ ဘားကကျိုးနေပြီး ပိတ်လို့မရတော့ပါဘူး၊ ရေတွေကတဝေါဝေါထွက်နေတာပေါ့။ကျနော်လည်းတံခါးလေးပြန်ပိတ်၊ အောက်ထပ်ဆင်းပြီးတာဝန်ကျသင်္ဘောသား ရှာရတာပေါ့။ တွေ့တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ၊ သူကလည်းသူးအထက်အရာရှိကိုသတင်းပို့ပါတယ်။ အရာရှိက လောလောဆယ်တော့ တစ်ခုခုနဲ့ ဆို့ထားလိုက်ကွာ၊ မြို့ရောက်မှ ဘားအသစ်တစ်ခု ၀ယ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ သင်္ဘောသားလည်း ပုဆိုးစတစ်ခုဖြဲ၊တုတ်တစ်ချောင်းရှာပြီးယူလာပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီအခန်းထဲအမှတ်တမဲ့ ၀င်သုံးပြီးတော့မှ ရေမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုပြီး ခရီးသည်ဘက်ကစဉ်းစားပြီးပြောပြတော့၊ သင်္ဘောသားက ဟုတ်တယ် သော့တစ်ခါတည်း ခတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးသော့တွဲပါယူပြီးအပေါ်ထပ်ကိုတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ ရေထွက်နေတဲ့အခန်းလိုက်ပြ၊ သင်္ဘောသားလဲတံခါးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ အခန်းထဲက
ဆိုတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့လဲ အခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့၊ လားလား……..
“ကန်တော့နော်အမေ..ကန်တော့….ကျနော်တို့ကရေပိုက်ပြင်မလို့ဖွင့်လိုက်တာ” လို့ပြောပြီး တံခါးပြန်ပိတ်၊ ကြိတ်ပြီး တခွိခွိ နဲ့အပြင်မှာရယ်၊တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့အဖြစ်၊ ပစ်ပစ်နစ်နစ်ပဲအဆဲခံရမလား၊ပါးပဲ ရှစ်စိပ်ကွဲမလား၊ရင်ထဲကတထိတ်ထိတ်။
ဟိုတုန်းကအမျိုးသမီးကြီးတွေ ၊အနေအထိုင်ပိရိပုံများ၊မရိုသေ့စကား အခန်းထဲပိတ်ပြီးဆီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့၊ ပွဲသွားရင်း ၊ကားစီးရင်း လမ်းဘေး ငုတ်တုတ်ထိုင်သလိုမျိုး၊လုံချည်စလေး ရှေ့နောက်အုပ်လို့၊ ခြေခုံလေးလောက်ပဲ မြင်ရတာကလား၊ ကျနော်တို့ အမျိုးသားများအဲသလိုအနေအထားနဲ့မဖြစ်နိုင်။ အမျိုးသားများထားပါတော့၊ ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်လို့ ခရီးသွားတဲ့အခါ သွားကောင်းလာကောင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ဆိုသော်ညား၊ အရေးကြုံလို့လမ်းဘေးထိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုထိုင်ကြပါ့။
တအောင့်ကြာတော့၊ တံခါးလေးပွင့်ပြီး အဒေါ်ကြီးထွက်လာ……
သင်္ဘောသား ကတော့မျက်နှာလေးချိုချိုနဲ့၊ အဒေါ်ကြီးရယ် ဘာလို့လော့ချမထားတာလဲဆိုလေတော့…..
“နင်တို့ တံခါးကလည်းဟယ်၊ပိတ်စရာဂျက်(အိမ်တွေမှာသုံတဲ့ဂျက်မင်းတုန်းကိုဆိုလိုဟန်ရှိ) လေးဘာလေးတောင်တတ်မထားဘူး၊ ဒီလောက်တောင်ပဲ ဆင်းရဲရသလား” လို့ ဘုဆတ်ဆတ်ပြောပြီးထွက်သွားပါလေရော။တော်သေးတာပေါ့။
တကယ်တော့တံခါးက အပြင်ကလက်ကိုင်ဂေါက်လေးကိုအောက်ကိုဆွဲလှည့်ချပြီးဖွင့်၊အတွင်းကလည်းအဲဒီအတိုင်းပဲ၊ လော့ချချင်ရင် ဂေါက်ဘေးက လက်တဆစ်လောက်ရှိတဲ့ဘုလေးကိုကန့်လန့်လှည့်လော့ချရတဲ့အမျိုးအစားပါ။ အဒေါ်ကြီးခမျာဂေါက်ကိုတော့လှည့်ဖွင့်တတ်ပါရဲ့၊ဂျက်ကိုတော့ဘယ်လိုချရမှန်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို ကမောက်ကမ အဖြစ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတာပါပဲဗျာ။ ။
has written 70 post in this Website..
View all posts by ကြောင်လေး →
အလေးသွားပြီး.. ရေနဲ့ဆေးတာ.. အိန္ဒိယဇာတိနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီအလေ့အကျင့်က.. အရှေ့တောင်အာရှကူးပြီး.. ဘိုထိုင်အိမ်သာမှာ.. ရေပိုက်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ကုန်တာထင်ကြောင်း..
ယူအက်စ်နဲ့..ဂျပန်မှာ.. ဘိုထိုင်အိမ်သာမှာ.. ရေပိုက်နဲ့ရေဆေးနိုင်တာ.. ရှာ၍အလွန်ခဲယဉ်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း..။ အိမ်သာသုံးစက္ကူသာရှိပါကြောင်း..
အဲသလိုလားသဂျီးရေ၊ဒါကြောင့် ဒီက ဗိုလ်ထိုင်တွေဘေးမှာဟန်းစပရေးော၊တစ်ရှူးလိပ်ထည့်တဲ့ခွက်ရော၊ ဆပ်ပြာတင်တဲ့စင်တွေပါစုံလို့၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်တွေကလည်းဝမ်းဆက်ဆိုပြီး အတွဲလိုက်ရောင်းတတ်တာ ကလား။ ဒီကကျေးလက်တွေမှာတော့ အဲ့သဟာတွေဘာမှမလို၊ တုတ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်း ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်လို့၊ ကျန်ခဲ့တဲ့အနှစ်လေးဆယ်လောက်တုန်းက ကြောင်လေးတို့တောင် အဲသလိုမျိုး ရှင်းခဲ့ရသေးတာ၊
အခုနာဂစ်နောက်ပိုင်း အင်ဂျီအိုတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျေးရွာသားတွေ အသိအမြင်ရှိလာပြီး ကျေးလက်အိမ်သာတွေ အဆင့်မီလာပါပြီ၊ရေလောင်းအိမ်သာနဲ့ ရေအိုးလေးတွေနဲ့၊
ရေဆေးတဲ့အကျင့်ကတော့စွဲနေပြီ၊ ရေဆေးလိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတယ်။
အလေးသွားပြီး.. ရေနဲ့ဆေးတာ.. အိန္ဒိယဇာတိနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်..။)))
ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မီးရှို့တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို မေ့ထားပြီး ပြောရရင်
အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားတွေရဲ့ တစ်ချို့သော ထုံးစံတွေ၊ နေထိုင်မှု့ပုံစံတွေဟာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတယ်လို့မြင်မိတယ်..။
ဇနီးအဖြစ်နဲ့ဆိုရင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးတွေဟာ နှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလို့လဲ မှတ်ချက်ချတာကြားဖူးတယ်…။
ဦးဦးပါ……ငှက်ပျောဖက်ခင်း၊ ထမင်းပုံ၊ပဲဟင်းစမ်း၊သနပ်တမျိုးနဲ့၊ငရုတ်တောင့်လှော်၊ ဆားပုံပြီးစားရတဲ့ ဟိန္ဒူအ်ိမ်အလှူကိုတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကျနော်ဆိုလဲ သိပေါ့မလားလို့ ပါဗျာ
ရယ်လိုက်ရတာ။ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒီတုံးက သင်္ဘောအိမ်သာတွေက ဘိုထိုင်တွေကို မသုံးတတ်(ရွံလို့) ခြေထောက်နဲ့ တက်နင်းပြီး ထိုင်ကြတာ။နောက်တော့ ဘိုထိုင်အိမ်သာဘေးမှာ သစ်သားခုံပတ်ရိုက်ထားရတာတောင် တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရေဘားပိတ် ဗော်လန်တီယာ ကို သာဓုပါတော်။
အိမ်သာတက်ပြီး ရေမဆေးတဲ့ ဘုရင်(အမှတ်မမှားရင် နရသူလို့ ထင်ပါတယ်) ကို ကုလားမင်းသမီးက ထွီလို့ လုပ်ခံရတာနဲ့ အမျက်တော်ထွက်ပြီး သတ်လိုက်တာ၊ သူလည်း ကုလားတွေက တမန်ယောင်ဆောင်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကုလားကျမင်းကို သတိရမိပါတယ်။
ကိုစံလှကြီးဆိုရင်တော့ ရေရေရာရာ ပိုပြောနိုင်မှာပဲ။
အဲဒါ နရသူလို့ ခေါ်တဲ့ကုလားကျမင်းပဲ။ သူဟာ အဖဖြစ်တဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး မကျန်းမမာရှိတုန်းမှာ မျက်နှာကို အဝတ်နဲ့ဖိသတ်ပြီး ထီးနန်းကိုရယူခဲ့တာပဲ။ နောင်တော် မင်းရှင်စောကိုလည်း ပွဲတော်မှာ အဆိပ်ထည့်ပြီး သတ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး သံဃာတွေကို အတင်းအကျပ် လူဝတ်လဲရအောင် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ မြန်မာရှင်ဘုရင် ထဲမှာအဲဒီလို သံဃာကို မလေးမစားလုပ်ဝံ့တဲ့လူ အရမ်းရှားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးလိုလိုက သာသနာ့ဒါယကာ ဘွဲ့ကိုတော့ မက်မောကြတာကိုး။ ကုလားမင်းသမီးကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် သန်လျှက်နဲ့ ခုတ်သတ်တာလို့ သိရတယ်။ အဲဒါ ကုလားသူရဲကောင်း ၈ ယောက် ဘိသိက်ဆရာတွေယောင်ဆောင်ပြီး သူသတိမေ့နေတုန်းမှာ လုပ်ကြံလိုက်တာပဲ။
နောက်ပြီး ယုံတာ မယုံတာ အပထား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ပြောအုံးမယ်။ ပုဂံရာဇဝင်မှာ စလေငခွေးလို့ ခေါ်တဲ့မင်းရယ် အခုနရသူဆိုတဲ့ ကုလားကျမင်းရယ် ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ နရသီဟပတေ့ဆိုတဲ့ တရုတ်ပြေးမင်းရယ်က လူတယောက်ထဲလို့ အဆိုရှိတယ်။ လူဝင်စား ဖြစ်တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားရှင်ကြွလာတုန်းက တန့်ကြည်တောင်စောင့် ဘီလူးက အင်ဖက်ကြီးသုံးခုကို ထီးလိုလုပ်ပြီး မိုးပေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့် ဘုရင် သုံးဘဝဖြစ်ရတယ် လို့ဆိုတယ်ဗျာ့။ သုံးယောက်စလုံး သိပ်အသုံးမကျပုံခြင်းလည်း အတူတူပဲ။ ဒါကတော့ မယုံရင်လည်း အချက်အလက်အနေနဲ့ သိရအောင်ပေါ့ဗျာ။
ကိုကြောင်လေးရေ ခင်ဗျားပို့စ်လေး ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ဝင်လျှာရှည်မိတာ စိတ်မရှိပါနဲ့။
ိုကိုစံလှကြီးရေ လျှာရှည်တယ်လို့မထင်ပါခင်ဗျာ၊ အန်တီပဒုမ္မာရဲ့အမေးကိုဝင်ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့မေ့ပျောက်နေတာလေးတွေ ပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်။
“နောက်ပြီး ယုံတာ မယုံတာ အပထား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ပြောအုံးမယ်။ ပုဂံရာဇဝင်မှာ စလေငခွေးလို့ ခေါ်တဲ့မင်းရယ် အခုနရသူဆိုတဲ့ ကုလားကျမင်းရယ် ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ နရသီဟပတေ့ဆိုတဲ့ တရုတ်ပြေးမင်းရယ်က လူတယောက်ထဲလို့ အဆိုရှိတယ်။ လူဝင်စား ဖြစ်တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားရှင်ကြွလာတုန်းက တန့်ကြည်တောင်စောင့် ဘီလူးက အင်ဖက်ကြီးသုံးခုကို ထီးလိုလုပ်ပြီး မိုးပေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့် ဘုရင် သုံးဘဝဖြစ်ရတယ် လို့ဆိုတယ်ဗျာ့။ သုံးယောက်စလုံး သိပ်အသုံးမကျပုံခြင်းလည်း အတူတူပဲ။ ဒါကတော့ မယုံရင်လည်း အချက်အလက်အနေနဲ့ သိရအောင်ပေါ့ဗျာ။”
နရသူက ရှမ်းညီနောင်တွေထဲက မဟုတ်လားဗျ ကိုစံရေ။
နရသူက ရှမ်းညီနောင်သုံးပါးထဲက မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ ရှမ်းဗမာ ညီနောင်သုံးပါးက အသင်္ခယာ ရာဇသင်္ကြန် သီဟသူပါ။ နရသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ရေးတဲ့ မြန်မာ မွန်ဂိုစစ်ပွဲမှာလဲ သီဟသူလို့ပဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။
အန်တီပဒုမ္မာ–အဲဒီအချိန်တုန်းက နယ်ဖက်ကလူတွေဗိုလ်ထိုင်ကိုမသုံးတတ်ကြပါ၊ တချို့သုံးတတ်သူများကျတော့လည်း၊ရှေ့ကလူကခြေထောက်တွေနဲ့တက်နင်းသွားလို့ညစ်ပတ်နေတော့ တက်နင်းရတော့တာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက တံခါးချက်နဲ့ လက်ကိုင်ကို မသုံးတတ်ကြတာပါ။
သင်္ဘောစီးခဲ့တဲ့ အတွေ့ ကြုံလေးတွေက ..အ ခုဆိုလျှင် ပြန်ပြောပြရုံနဲ့တောင် ..ရယ်စရာ အဖြစ်ပျက်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တာပါလားနော် ။
အိမ်သာထဲက အဖွားကြီးက … ဆဲမသွားပုံထောက်လျှင် ..အပျိုကြီး မဟုတ်လောက်ဘူးပဲ ….
pazflor –ကျနော်တို့မှာတော့ ရေနဲ့ဆပ်ပြာနဲ့မှမသုံးလိုက်ရရင် နေမထိထိုင်မသာ…..
ိအိတုန်– ရီစရာတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး၊ မြန်မာစကားမှာ “ငိုအားထက်ရယ်အားသန်” ဆိုတာရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ “ရယ်အားထက်ငိုအားသန်” ရတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ဗျာ။